Igwe satellite nke GOES-16 na-eziga mbido mbido dị elu nke ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyi bi n’ime ụwa nke, n’anya anyị, buru ibu; N’abughi n’efu, mgbe anyị chọrọ ị gaa kọntinenti ọzọ, ọtụtụ oge anyị enweghị ihe ọzọ ma anyị ga-eme karie ịba ụgbọ elu ma nọrọ n’ime ya nwa oge. Ma eziokwu bụ na ọ bụ otu n’ime obere mbara ala ndị dị na Eluigwe na Ala. Iji nye anyị echiche, Jupita ga-adaba na mbara ala 1000 n'uwa dịka nke anyị, na Sun 1 nde.
Ma, n’ihi na ọ dị obere apụtaghị na ọ bụghị ihe ịtụnanya. N'ezie, ruo ugbu a ọ bụ naanị otu anyị maara na ọdụ ụgbọ mmiri, nke werela ọtụtụ ụdị na agba na-eme ka ụwa bụrụ ihe pụrụ iche (opekata mpe, ruo ugbu a). Ugbu a, anyị nwere ohere ile ya anya site n ’ụzọ dị iche: site na nke igwe NASA‘ GOES-16 ’., nke zitere ụfọdụ ihe oyiyi dị egwu.
1 Osimiri Africa
3 Ndị Caribbean na Florida
4 Panels Infrared nke United States
Foto - NASA / NOAA
Ikuku ikuku nke ụsọ oké osimiri Africa nke a hụrụ na ihe oyiyi a dị egwu nwere ike inwe mmetụta na ike na nhazi nke ajọ ikuku mmiri. N'ihi GEOS-16, Ndị na-amụ gbasara ihu igwe ga-amata etu ajọ ifufe ga-esiwanye ike ka ha na-eru North America nso.
Nkọcha nke onyonyo a nyere anyị ohere ịhụ oke ifufe nke gabigara Argentina n'oge ejidere ya.
Ndị Caribbean na Florida
Kedu onye na-arọbeghị nrọ ịga Caribbean na / ma ọ bụ Florida? Ka ọ dịgodị ụbọchị ahụ na-abịarute, ị nwere ike ịhụ ya karịa mgbe ọ bụla ọzọ; a na-ahụ ọbụna mmiri na-emighị emi.
Panels Infrared nke United States
Na onyonyo a nke mejupụtara pan 16, a hụrụ United States na infrared, nke nyere ndị na-amụ gbasara ihu igwe aka ịmata ọdịiche dị n’etiti igwe ojii, alụlụ mmiri, anwụrụ ọkụ, akpụrụ na ntụ na-agbọpụ ọkụ.
Satellite ahụ weghaara ọmarịcha ọmarịcha nke Ọnwa ka ọ na-agba ụwa anyị gburugburu.
You masịrị ha? Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere GOES-16, pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Satọde NASA nke GOES-16 na-ezigara onyogho mbido mbụ nke ụwa